All popular myanmar blogs available here, latest information related to myanmar news, foods, cooking, entertainment, travel, lifestyle etc., available in one stop. MYANMAR BLOG READER
ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကို ဆန္ဒပြသည့်အနေဖြင့် အာဂျင်တီးနားမုန့်ဖုတ်သမားများ ပေါင်မုန့် ၅ တန်ကို အခမဲ့ဝေ - - ကမ္ဘာ့သတင်း ဗြူနိုအေးရိစ်၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဧပြီ ၂၆ ။ ။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ဗြူနိုအေးရိစ်မြို့မှ မုန့်ဖုန်သမားများသည် လ...
Singapore manufacturing output in March up 5.9% - SINGAPORE: Singapore’s manufacturing output rose 5.9 per cent in March fromayear ago, according to figures released by the Economic Development Board (...
ပိုင်စိုးဝေ - သိန်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း - *ပိုင်စိုးဝေ - သိန်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း* *(၂၁ - ၃ - ၈၆)* *(မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၈* နောက်ဆုံးအခေါက်ပါပဲ ကျွန်တော် ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ် ...
Ex-Cop Charged in California’s Golden State Killer Spree - A man once sworn to protect the public from crime was accused Wednesday of livingadouble life terrorizing suburban neighborhoods at night, becoming one o...
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်သစ် ၃ ဦး ဖြည့်စွက်ခန့်အပ် - မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်သစ် သုံးဦးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဖြည့်စွက်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပ...
U.S. investigates alleged atrocities committed against Myanmar's Rohingya - Rohingya refugee children fly improvised kites at the Kutupalong refugee camp near Cox's Bazar, Bangladesh, on Dec. 10, 2017. (Photo: Damir Sagolj / Reute...
Myanmar | The Guardian
Leeds owner defends Myanmar tour: 'This is about people not governments' - - Andrea Radrizzani says friendliesa‘carefully considered decision’ - Myanmar accused of ethnic cleansing and human rights abuses The owner ...
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမှာ မီးသတ်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူ မီးငြိမ်းခဲ့တဲ့ ထွန်းကိုကို - မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် ထွန်းကိုကို မှ လှိုင်သာယာ၊ ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံတွင် မီးငြိမ်းသတ်နေကြတဲ့ ရဲဘော်များနှင့်အတူ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို...
Mizzima - Myanmar news and insight
Smoke from burning landfill site affects health of Hlinetharyar residents - Daung Lu Category: - News - Domestic *Smoke fromafire at Yangon's biggest dumpsite, Hteinpin. Photo: Thura/Mizzima* Smoke billowing from Ht...
Ma Tin Nyunt - Watch The post Ma Tin Nyunt appeared first on Shwe Dream.
- ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနှစ်) ============================== ယခုနှစ် ၁၃၈၀ခုနှစ်ကတော့ ဗုဒ္ဓဟူး ရာဟု ဖွား များစွာအတွက် ... ဘ၀ရုန်းကန်ရမှုတွေ ..အ...
Popular Reef Aquarium LFS in Singapore - Updated Apr-2018 - If you areareef aquarium lover living in Singapore, here isalist of reputable LFS in Singapore. This may not be the complete list however I am here lis...
Three pillars of Love - It takesalot to make love work. When we talk about romantic relationships, we might findalot of factors that are important and might determine whethe...
ပန်းသီး ဖုန်း တဆယ် နှင့် ပန်းသီးနာရီ စီးရီး သုံး - ပန်းသီး ဖုန်း တဆယ်က ဖုန်းနံပါတ် ရှိတာနဲ့ ဖေ့တိုင်း ဗီဒီယို အော်ဒီယို အသံ ရော ရုပ်ရော ခေါ်လို့ရတာပါ ပန်းသီးအိုင်ဒီ မရှိလည်း အဆင်ပြေသွားပါပြီ ကမ္ဘာရွာ လို့စတိ...
Chaw Kalayar - [image: Chaw Kalayar] [image: Chaw Kalayar] [image: Chaw Kalayar] [image: Chaw Kalayar] [image: Chaw Kalayar] [image: Chaw Kalayar] [image: Chaw Kalaya...
5 Ways to Set Your Conversation on Fire - Ever need to strikeaconversation? Spiceadinner up? Are you feeling like you needagood discussion, but when it comes down to it, have no idea what you...
My Burmese BlogMy Burmese Blog
CMS Web Diary
Myanmar Celebrity News| Gossip| Fashion| Entertainment| Photos| Videos
Zwel Pyae & Su Pan Htwar Star In "International Heart-Broken Day" Movie - Here are snapshots of "A Pyi Pyi Sai Yar A Thea Kwae Thaw Nae" or "International Heart-Broken Day" movie making by Director Myat Khine at 50th Street in ...
Girlfriend killer sentenced to death -
ရွေးကောက်ပွဲအလွန် မြန်မာ့အနာဂတ်နှင့် မြန်မာဗေဒင်ပညာရှင်များ အမြင် - စုစည်း ရရှိသမျှ မြန်မာ့အနာဂတ် ဟောကိန်းတိုင်းတွေက အားတက်စရာလည်း ရှိသလို ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေလည်း မနည်းဘဲ သတိထားရမှာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဦးနေဝင်းနဲ့ ဦးသန်းရွှေ...
Korea Trip - Part3- ၀က်ခြေထောက်ကို ဒီလိုတမုန်းဆွဲခဲ့တယ်... ဒါကတော့ နာမည်ကျော် SM Town က ဖွင့်ထားတဲ့ Myeong Dong ဘက်က SPAO ဆိုင်လေးပါ SM Town က အဆိုတော်တွေနဲ့ ပတ်သက်သမျှတေ...
Health and Beauty Daily Promotion
Chic slim fit dress with embroidered-style front and lace-style back - Fast shipping - Chic slim fit dress with embroidered-style front and lace-style S$18.90 Earn additional discount if you place your order via this website. ...
Republic of the Union of Myanmar and also known as Burma, isasovereign state in Southeast Asia bordered by Bangladesh, India, China, Laos and Thailand.
There are many Myanmar blog posts floating around the web about Myanmar, and many of them are outdated. Some blogs started in 2005, the earlier blogs were written in English, as there was no unicode font at that time. After the Zawgyi font was released and Myanmar blogging is getting popular using native language.
Myanmar Blogs Reader is the place where blog posts, latest news, foods, entertainment, travel and many other information available at one stop.
Gov’t, MRF donate 300 tonnes of rice to Sri Lanka flood victims - A ceremony to donate 300 tonnes of rice to Sri Lanka’s flood victims was held by the government and the Myanmar Rice Federation (MRF) on 24 February at P...